डेनमार्कको कोपनहेगनमा कांग्रेसको प्रशिक्षण र विश्व भेला जारी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १४:३३ English
डेनमार्कको कोपनहेगनमा कांग्रेसको प्रशिक्षण र विश्व भेला जारी
कोपनहेगन । नेपाली काग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाले वर्तमान सरकार संघियता विरोधी सरकार भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कको १४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
७ असार २०७६, शनिबार २३:०४ मा प्रकाशित